ဥမ္မာဒန္တီဘွဲ့သင်္ဂီနှင့် ၊ နတ်မှီသဏ္ဌာန်
လှပဟန်မူ ၊ နှိုင်းရန်မပြု
မိုးအောက်သူတွင် ၊ ဇမ္ဗူမင်းစံ
ရွှေပွတ် ခံဖို့ ၊ ရိုးတံရိုးဆစ်
ပြေပြစ်ချောမော ၊ မြကြောစိမ်းစိမ်း
ရှိန်းရှိန်းစိုစို ၊ လှသည့်ကိုယ်၌
ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် ၊ အသွယ်သွယ်မူ
တင့်တယ်စေမှု ၊ သိကြားထုသို့
ညံ့နုသားရေ ၊ မြဆံကေလည်း
ဖြေသော်ပြန်တက်၊ ဖနောင့်ထက်ဝယ်
ကျီးနက်တောင်ပံ ၊ ပိတုန်းပျံသို့ ဖိတ်လျှံရောင်ခြည်
ရုပ်ရည်ထိန်၍၊ ဒေဝိန္ဒရ၊ သိကြားသမီး
စံသီးနတ်တူ ၊ မြင်သသူတို့
လူပုထုဇန် ၊ ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မူ
လျက်မြန်ခု မြောက် ၊ သေရည်သောက်သား
မျောက်၏ပမာ ၊ ထောင့်ငါးရာကြောင့်
ကာယိနြေ္ဒ ၊ မှိန်မသေဘဲ
လက်ခြေအာပေါင် ၊ ချွန်းတောင်ဉာဏ်ခိုင်
မချိတ်နိုင်၍ ၊ ထိုင်ယောက်ထယောင်
ကတောင်ကချောက် ၊ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ
ကိုးရာမရ ၊ ရူးအောင်လှသား . . … ။
ဒီကဗျာလေးကို ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆိုတော် ဦးရွှန်း ရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ ဥမ္မာဒန္တီ ပျို့ကဗျာလေးမှ ကောက်နှတ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥမ္မာဒန္တီ လို့ဆိုတာနဲ့ကျနော်ရဲ့ မိတ်တွေ သူငယ်ချင်းများရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေမှာ ပါ ။ အခုလို တန်ဆောင်တိုင် လ ရောက်တိုင်း ဥမ္မာဒန္တီ ဇတ်လမ်းလေးကိုသတိရမိပါတယ် … ။
တချိန်က တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်ည တစ်ညမှာ အရိဋ္ဌပြည့်ရှင် သိဝိမင်းကြီးဟာ မြို့တော်အတွင်း ဆင်တော်စီးပြီး အပူဇော်ခံ ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ မြို့ တော်ရဲ့ တစ်နေရာမှာ စစ်သူကြီးအဘိပါရက ရဲ့ ဇနီးမယား အလှဒေဝီ မယ်ဥမ္မာဒန္တီရဲ့အလှကို မြင်တွေ့ ပြီး အရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ဆိုတဲ့မနောကံနဲ့ ပြစ်မားမိခဲ့တာကို သတိသံဝေဂကြီးစွာရကာ တော ထွက်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာကဗျာတွေထဲမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆိုတော်များဖြစ်တဲ့ ရွှေတောင်နန္ဒမိတ်နဲ့ မဟာမင်း လှမင်းခေါင်ဦးရွှန်း တို့ရေးဖွဲ့ တဲ့ ဥမ္မာဒန္တီ ပျို့ကဗျာများဟာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သလို ဇာတ်သဘင် ဖခင်ကြီး ဂရိတ်ဦး ဘိုးစိန်ရဲ့ ဥမ္မာဒန္တီဇာတ်တော် ဆိုရင် သမိုင်းမှတ်တိုင် တစ်ခုလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် … ။
ဥမ္မာဒန္တီ ကို သိဝိဘုရင်ကြီးမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ရူးသွပ်ခဲ့ရပြီး ၊ ဆင်တော်ပေါ်မှ လိမ့်ကျလုမတတ် ရာဇဣနြေ္ဒ ပျက်ခဲ့ရပုံတွေကို ပန်ချီ ၊ ကာတွန်း ၊ ပြဇတ် ဆရာများက ဟာသမြောက်အောင် ခေတ်အဆက်ဆက် သရုပ်ဖော် ကျီစယ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ် … ။
အခုလို တန်ဆောင်တိုင် လရောက်တိုင်း စာပေအနုပညာ သမိုင်းမှာ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဥမ္မာဒန္တီ ကို ကျနော်တို့ တွေ သတိတရရှိနေကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ် …။
မှတ်ချက် ။။ ဦးရွှန်းကို တချို့စာပေထဲမှာ အင်းဝခေတ် ပညာရှိအမတ်မင်းလို့ဖတ်ဘူးပါတယ် ။ ဦးရွှန်းရဲ့ ကဗျာအများစုမှာ ပျို့ကဗျာများဖြစ်ပြီး ခေတ်ပြိုင် စာဆိုတော်များဖြစ်တဲ့ ဦးကြော့ ၊ ဦးသာ တို့ ရဲ့ ကဗျာများနဲ့တွဲဖက်တွေ့ ရတာကြောင့် ကုန်းဘောင်ခေတ်လို့ ပဲ ထင်မိပါတယ် ။
ကိုးကား ။။။။ ဥမ္မာဒန္တီအလှနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ည …… အောင်မြင့်မြတ် (ပြည်ရွှေဘို)
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:38 AM2comments
ပန်းရုံ မှာ လှိုင်ပျံ့ လို့ 
လေယူရာ ကြူမွှေး စေ တယ်
ပန်းခ တဲ့ စမ်းဆီမှာ
အေးမြလို့စီးစေတယ်
တောင်ယံမှာ တေးထပ်လို့ 
ကျေးငှက်တို့မြူးစေတယ်
ဒီရေမြေကို လွမ်းမိလို့ 
ပြည်တော် ပြန်ရေး တွေးမိတယ်
ဘဝင်မှာ မောရှာလို့ 
ရင်မှာဖြင့် ဆွေးပို တယ်
ဘယ်ကုသိုလ် နည်းပါလို့ 
ဇမ္ဗူဝယ် ကြုံခဲ့လေ သမျှ
မာန်းတင်းကာ ရှိစေ တော့
အာကာခွင် ညိုပြာနှော တဲ့
ဘယ်ဆီကို ရှောင်ပြေး ပါလို့ 
လွမ်းစိတ်တွေ ဆူး ပါစေကွယ် …..……….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:01 AM0comments
ရွှေဖီမြေ မှာ လက်ဖက်ခူးတဲ့
သူမ လက်တစ်စုံ က
အောင်မြင်မှုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ် …. ။
ရွှေဖီမြေ မှာ လှမ်းခဲ့တဲ့ ခြေတစ်စုံက
ကြံ့ကြံ့ခိုင် စေခဲ့တယ် ….။
နေဝင်ချိန်အထိ ထွန်းလင်းတောက်ပနေ တဲ့
သူမ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကို
ဖြူစင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ 
သူမ ဆိုတာ ……
တော်ဝင် တဲ့ ဂုဏ် တွေ မရှိ ခဲ့ပါဘူး ….. ။
ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ
ကျနော် ရင်ထဲ စကားလုံးတွေ လည်း
ကဗျာ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး …..။
ကျနော် ရင်ထဲမှာ တော့
သူမ …… ဆိုတာ ……..
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တော်ဝင်ပန်းလေး တစ်ပွင့် ပေါ့ ….. ။
ယနေ့ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာရက်မြတ် မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ အေးချမ်းသာယာသော ဘဝ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ ချစ်သော ကောင်းကင်ဖြူ ရေ ....... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:06 AM4comments
အမှန် နည်းခိုက် ၊ ဤ လောက ဝယ်
တက်သိ စုံစေ ၊ မျိုးဂုဏ် တင့် နှင့်
ခေတ်တန်း ရှေ့ မှ ၊ ခေတ်စမ်း လူငယ် ၊
ချစ်ဆန်း သာလို့၊ ချစ်ကြိုက် တွေ့ ဆုံ
ချည်မျှဉ် တစ်လွှာ ၊ အပ် တစ်ချောင်းခြား
ရှိစေ များလည်း ၊ စိတ် ၏ ကွယ်ရာ
ယုံမှား ထင်လျှက် ၊ မုသားမဲ့ ကင်း
မာယာ ရှင်းစေ ၊ ဆန္ဒ စေရာ
သိက္ခာ ကင်းမဲ့၊ ပန်းခြွေ မြေခ
ငို မျက်ရည် လည်း ၊ ကတိ ကိုထပ်
သစ္စာ ထိပ်တင် ၊ ချစ်ရင်း စိတ်ဖြင့်
ချော့တေး ဆို တဲ့ ……. ကို လူငယ် ……… ။
ကတိသစ္စာ ၊ သည်းသည်း ရွာပြီး
ပျော်ရွင် မြူးကာ ၊ အိပ့်တန်း ဝင်ချိန်
အိမ်ရှေ့ ရောက်မှ ၊ အသွင် ထူးထူး
ဒေါသ ဖုံး တဲ့ ၊ အဖေ အသံ
အိမ်လုံး လွှမ်း လျှက် ၊ အမေ့ မျက်ရည်
မိုးသည်း ထက်မှ ၊ အသံ တိတ်ဆိတ်
ရှိုက် ရှိုက် ငိုငြီး ၊ ရင် နစ် စေရာ
အကြောင်း စုတော့ ၊ ချစ်လှ စွာသော
ပျိုစင် နှမ ၊ ကိုယ်ဝန် နှစ်လ
မိုက်ဇာတ် ရယ် ပေါ် ၊ ရင်ထက် ငို ငြီး
အရှုက် ဒေါသ ၊ သ်ိမ့်သိမ့် မြို ၍
ချစ်ရင်း စိတ်ဖြင့် ၊ ချော့တေး ဆို ရာ
တေး၏ ကျိန်စာ ၊ ရင်၌လောင် လေတော့ ….. ၏ …… ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:25 AM5comments
အသက်တွေ ဆုံးတဲ့အထိပဲ ……. ။
ဒီမြေဒီရေ မှာ ဗိုလ် လုပ် ပြန်တယ် ….။
မသေယုံ ကျန်တဲ့ အကောင်တော့
ဟာလာ လုပ်ခံရတယ် ….. ။
တချို့ ကတော့ …..
သေတာတောင် လှလှပပလေး ချိတ်ဆွဲပြီး
ကိုတရုတ် ခေါက်ဆွဲဆိုင် မှာ
အပိုင်းပိုင်း အခုတ် ခံရတယ် … ။
ဒီလိုနဲ့ကျူပ်တို့ဘဝတွေလည်း
အိုးမဲ အသုတ်ခံရမဲ့ နေ့ ရက်တွေ ကို စောင့်မျှော်လျှက်ပေါ့ …….. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:04 AM6comments